mairie-antananarivo – Assainissement Anosy sy ny manodidina
Assainissement Anosy sy ny manodidina
auteur 31 aogositra 2017 Commentaires fermés
Ny Alakamisy 31 Aogositra 2017 dia nanao fanadiovana goavana teny amin’ny faritra Anosy sy ny manodidina ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, fanadiovana izay notarihan’ny Chef de Corps ny Polisy Monisipaly, ireo Polisin’ny tsena ary ireo ekipan’ny mpanadio avy eo anivon’ny Boriboritany Voalohany izay mamaly rateo ny hetahetan’ny Mpanolontsainan’ny Tanana sy ny fanjakana.
Anisan’ny toerana betsaka biraom-panjakana eny Anosy ka izay indrindra no tena antony nanaovana izao hetsika fanadiovana izao. Araka ny nambaran’ny Chef de Corps ny Polisy Monisipaly dia ny Tanàna madio sy milamina no manamora ny fanaraha-maso sy ny fitandroana filaminana ; rehefa betsaka mantsy hoy izy ireo ny mpivarotra mijorojoro dia sarotra ny mamantatra ny mpanao ratsy sy ny olon-tsotra ka izay indrindra no tena hiezahan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra manamafy hatrany ny hetsika fanadiovana.
Mpivarotra maro isan-karazany toy ny hani-masika, voankazo, voninkazo ary taxi-phone no tsikaritra fa nameno ny sisin’ny arabe sy ny lalan’ny mpandeha tongotra nandritra ny hetsika. Tsy vitan’ny nanala ireo mpivarotra ireo fotsiny ny tompon’andraikitra fa mbola nanentana sy nampitandrina azy ireo mba tsy hiverina eny amin’ireny toerana voarara ireny.
Ny tanjona dia ny hitazonana izao fahadiovana izao mba tsy hiverenan’ireo mpivarotra sy taxi-phone eny an-toerana.Hisy araka izany ireo Polisy Monisipaly izay hifamezivezy, ankoatra izay dia efa misy Polisin’ny Tsena mijanona ihany koa eny an-toerana. Ireo ministera ihany koa etsy an-daniny dia angatahana fiara-miasa mba hanara-maso ny fahadiovana mba tsy ho very maina ny ezaka izay natao.
Ny hetsika fanadiovana toy izao dia mbola hitohy hatrany manerana ireo toerana hafa eto an-dRenivohitra satria ny Tanàna madio sy milamina no tanjona.